नेप्से Archives - Parichay Network
शेयर बजार आज झिनो अंकले बढे पनि सातामा २७.१७ अंक घट्यो
काठमाडौँ । शेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन बिहीबार झिनो सुधार देखिएको छ । यो साताको शेयर बजारमा ट्रेण्ड हेर्दा घटेको दिन ह्वात्तै घट्ने र बढेको दिन झिनो अंकले बढेको देखियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार आज शेयर बजार १.२९…
शेयर बजार ५.७४ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजार ५.७४ अंकले बढेको छ । ०.७४ प्रतिशतले बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक १५६१.२७ अंकमा उक्लिएको छ । आज १९३ कम्पनीका ८९ लाख ७१ हजार ३ सय ३ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब २३ करोड ३४ लाख ८९ हजार २४…
काठमाडौं । शेयर बजारमा मंगलबार गएको पहिरो बुधबार भने थामिएको छ । हिजो २२.९१ अंकले घटेको शेयर बजार आज भने करेक्सन हुँदै ९.३७ अंकले बढेको छ । ०.६१ प्रतिशतले बढ्दा नेप्से परिसूचक १५५५.५२ अंकमा उक्लिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज…
काठमाडौं । शेयर बजारमा मंगलबार पहिरो गएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)का अनुसार आज २२.९१ अंकले शेयर बजार घटेको हो । १.४६ प्रतिशतले घट्दा नेप्से परिसूचक १५४६.१५ अंकमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार आज १९९ कम्पनीका ७७ लाख २१ हजार ९…
लिबर्टी इनर्जीको आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, आइतबारबाट शेयर कारोबार शुरू
काठमाडौं । लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको प्रति शेयर अंकित तथा चुक्ता मूल्य रु. १०० कायम भएको १ करोड ५० लाख कित्ता साधारण शेयर(आईपीओ) सूचीकृत भएको छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ बमोजिक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) को भदौ ३१ गतेको…
शेयर बजारमा उत्साह, ३०.७८ अंकले नेप्से बढ्दा ३ अर्ब ७२ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)का अनुसार आज शेयर बजार ३०.७८ अंकले बढेको हो । २ प्रतिशतले बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक १५७२.१८ अंकमा उक्लिएको छ । नेप्सेका अनुसार आज १९१…
शेयर बजार ओरालो, कारोबार रकम पनि घट्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो र दोश्रो दिन लगातार बढेको शेयर बजार मंगलबार तेस्रो दिन भने घटेको छ । आइतबार १६.५६ अंक र हिजो सोमबार ३.२६ अंकले बढेको शेयर बजार आज ४.४७ अंकले घटेको हो । शेयर बजार आज ०.२९ प्रतिशतले घट्दा नेप्से परिसूचक १५३६.०३…
झिनो अंकले बढ्यो शेयर बजार, ३ अर्ब १३ करोडको कारोबार
काठमाडौं । साताको दोश्रो दिन सोमबार शेयर बजार झिनो अंकले बढेको छ । हिजो १६.५६ अंकले बढेको नेप्से परिसूचक आज भने ३.२६ अंकले बढेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) का अनुसार आज ०.२१ प्रतिशतले बजार बढ्दा नेप्से परिसूचक १५४०.५१…
लक्ष्मी उन्नति कोषको ६ करोड ५२ लाख इकाई धितोपत्र नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । लक्ष्मी उन्नति कोषको प्रति इकाई मूल्य रु. १० कायम भएको ६ करोड ५२ लाख ६२ हजार ३ सय ६० इकाई धितोपत्र सूचीकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से) र कम्पनीबीच उक्त सामूहिक लगानी कोष सूचीकरण सम्बन्धी सम्झौता आइतबार भएको…
नेप्से कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमा समस्या हुँदा रोकियो शेयर कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार खुलेको केही समयमै नेप्से कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली(टीएमएस)मा समस्या देखिएको छ । कारोबार प्रणालीमा केही प्राविधिक समस्या आएकोले हाल कारोबार रोक्का राखिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)…